I-Microsoft Office Student Discount (2020) - Izikole Namakolishi - Izipesheli
Ihhovisi leMicrosoft lingenye yesoftware yokwenziwa nokuhlelwa kwemibhalo ethandwa kakhulu. Kuyaziwa phakathi kwabafundi, ochwepheshe, namabhizinisi. Uthola izinzuzo eziningi ngokusebenzisa le nsizakalo yokuhlela. Sijabulela ukusetshenziswa okumnandi okulethwa isoftware etafuleni.
Kulo mhlahlandlela, sizoxoxa ngazo zonke izaphulelo zabafundi.
Ngabe ihhovisi leMicrosoft Linaso Isaphulelo Somfundi?
IMicrosoft ingumpetha wobuchwepheshe, futhi bahlala benethemba lokuthi bazobuyisela emphakathini. Kunezindlela eziningi ongazenzela izilaleli zakho. Uhlelo lwesaphulelo sabafundi luyatholakala kubo bonke abasebenzisi abafanelekile. Ungazama ukuthola lokhu kunikezwa uma une-ID yomfundi evumelekile. Amakholeji amaningi namanyuvesi nawo asebenzisa lokhu ukunikeza abafundi bawo into enhle. Ukulanda uhlelo lokusebenza lwedeskithophu kudinga ukuthi uthenge uhlelo. Izotholakala uma isikhungo sakho sezemfundo sibopha iMicrosoft ngohlelo lomfundi. Njengomuntu ngamunye, awukwazi ukuthenga uhlelo ngqo ukuze ulusebenzise.
Amahedfoni amahle kakhulu we-iPhone 12
Lungisa Iphutha leMicrosoft Minecraft Aka.ms/remoteconnect
Izinyathelo zokuthola isaphulelo sabafundi seMicrosoft Office:
Abasebenzisi bangathola isaphulelo sabafundi ngokulandela umhlahlandlela onikezwe ngezansi. Sisho zonke izinyathelo ezidingekayo ukunciphisa intengo yakho yokubhalisa. Nazi izinyathelo okufanele uzilandele.
Iwebhusayithi yehhovisi 365 inenketho ehlukile kubasebenzisi abafuna ukuthola uhlelo lwemfundo. Ungavakashela lokhu isixhumanisi . Kuzokusiza ukuphuma ngokuqala inqubo yesaphulelo.
Abasebenzisi abasha bangabhalisa kuwebhusayithi ngama-ID wabo wesikole. Ungafaka i-ID ye -edu epulatifomu.Izokusiza ukuthi ufinyelele isaphulelo somfundi esikhethekile. Benginethemba lokuthi ungakhetha inketho engiyiyona yomfundi lapho ufaka ikheli lakho le-imeyili.
Abasebenzisi kufanele bakhe i-akhawunti ye-Microsoft office. Kuzokwenza umsebenzi wakho ube lula kakhulu. Abasebenzisi bangaba nezinzuzo eziningi ngokusebenzisa lesi sici. Sincoma ukuthi ufake yonke imininingwane yakho kahle. Chofoza inkinobho yokuqala ukuze uqale ngokushesha ngenqubo yokudala i-akhawunti.
Abasebenzisi bangaqala ukusebenzisa izici ze-Microsoft Office 365 mahhala. Itholakala endaweni yesikhulumi samafu.Noma ngubani angathola ihhovisi leMicrosoft lisebenze online ngale ndlela. Abasebenzisi bangaqala ukudala noma yimiphi imibhalo.
Voila! Lokho bekuyizinyathelo zokuqala ukusebenzisa i-Microsoft office 365 yabafundi. Kumahhala ngokuphelele kuzindleko zawo wonke umuntu one-akhawunti yomfundi.
Izici zeMicrosoft Office Student:
Isaphulelo sabafundi seMicrosoft Office akusona isidingo. Ilungele wena inqobo nje uma ungasebenza nenguqulo eku-inthanethi. Nazi izici ongazisebenzisa ngohlelo lwe-Office 365 A1 Student.
1. Ukufinyelela kwamahhala kuzinhlelo zokusebenza ze-Microsoft
Abasebenzisi abane-akhawunti yesitshudeni bangazisebenzisa kahle lezi zinhlelo zokusebenza ekuqedeni izinhlelo zabo zasekolishi nezabelo. Ilungele labo abafuna indawo eyodwa kuyo yonke imikhiqizo yabo. Ezinye izinhlelo zokusebenza zepulatifomu zifaka i-Excel, iZwi, amaThimba, i-One Note, i-Powerpoint, nezinye eziningi.
2. IDrayivu eyodwa
IDrayivu eyodwa imahhala ukusebenzisa ipulatifomu yefu etholakala kubo bonke abasebenzisi. Sincoma ukuthi uzame lokhu. Kuphelele kulabo abadinga isikhala sokulayisha okuqukethwe kwabo. Abasebenzisi futhi bangabelana kalula ngesixhumanisi sedrayivu esisodwa nabafunda nabo ekilasini.
IMicrosoft uphawu olubheka kakhulu ukuphepha kwamakhasimende abo. Abasebenzisi bangalindela indawo evikelekile yesikhathi eside. Kuyasiza kakhulu kunoma ngubani ohlonipha ubumfihlo bakhe.
Isaphulelo somfundi wasehhovisi lakwaMicrosoft ukubhalisela okuhle abasebenzisi. Sincoma ukuthi nonke nizame namuhla. Kuyipulatifomu yokukhiqiza okufanele ube nayo yokusetshenziswa kwesikole sakho nasekolishi.
I-CBS All Access Student Isaphulelo
Umkhawulo Wokulanda weNetflix - Konke Kuchazwe Ngemininingwane
amakhodi wamakhadi wesipho aku-inthanethi mahhala
xbox bukhoma igolide online ikhodi mahhala
Iphutha lesipiliyoni se-nvidia geforce 0x0001
I-iphone x ibhajwe ku-apple logo
uhlelo lokusebenza oluhle kakhulu lokuskena mahhala lwe-android
lapho ongaya khona ukulanda ama-movie wamahhala